Lucy Hale – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Fantasy Island (2020) Unicode စိတ်ကူးယဉ် ဟော်ရာ ရုပ်ရှင်ကားသစ်တစ်ကား တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Rating နည်းပေမယ့် အတော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်နေတာ အံ့သြစရာပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ၁၉၇၇ လောက်က နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ Fantasy Island ဆိုတဲ့ စီးရီးရဲ့ Prequel ဇာတ်လမ်းအနေနဲ့ ရေးသားရိုက်ကူးထားခဲ့တာပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဇာတ်လမ်းနာမည်အတိုင်းပဲ ကျွန်းကြီးတစ်ကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီကျွန်းရဲ့ ပိုင်ရှင် မစ္စတာ ရို့ခ် ဟာ ကျွန်းပေါ်ကို ရောက်လာသမျှ လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက် (သို့မဟုတ်) အလိုချင်ဆုံး ဆန္ဒ တစ်ခုစီကို ပြည့်စေရမယ် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျွန်းပေါ်ကို ဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့ ကံထူးရှင်တွေကတော့ သူတို့လိုချင်တာတွေကို ဘယ်လိုဖြည့်ပေးမလဲဆိုပြီး သိချင်စိတ်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ရောက်လာကြတာပါပဲ။ သူတို့ထင်တာတော့ ကစားနည်းလေးတွေ၊ ဆင်ဆင်တူ နေရာလေးတွေ၊ ပုံရိပ်ယောင်ပြစက်လေးတွေနဲ့ လုပ်ပေးမယ် ထင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျွန်းပေါ်ကို ရောက်လာတဲ့အခါ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကအစ အားလုံးသော ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကိုတွေ့ရပြီး ထီပေါက်သလိုကို ပျော်ကြရပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီကျွန်းဟာ သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒထက် တကယ့် အတွင်းစိတ်ထဲက ဆန္ဒကိုသိမြင်နေပြီး ဖြည့်ပေးနိုင်တာကိုပါတွေ့လာရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအပျော်တွေကနေ ...
IMDB: 4.8/10 16645 votes
A-X-L (2018) Unicode အဆိုတော်ချောချောလေး Becky G ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးနာမည်က A.X.L (2018) ပါ။ Science fiction/action ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေသဘောကျနှစ်ခြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်တော့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုလဲ တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ A.X.Lဆိုတာက စစ်တပ်သုံးဖို့ အထူးတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ခွေးစက်ရုပ်ပါ။ A.X.L ဆိုတဲ့နာမည်လေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုပြောပြရရင် A = Attack(အတိုက်ခိုက်စွမ်းရည်) , X = Exploration (ရှာဖွေစွမ်းရည်) , L = Logistics (စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့စွမ်းရည်) ဒီလိုအရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စက်ရုပ်ခွေးဖြစ်ပါတယ်… စစ်တပ်ဟာအနာဂါတ်အတွက် စစ်မြေပြင်မှာအသုံးချဖို့အတွက် လူသားတွေအပေါ် သစ္စာအရှိဆုံးသတ္တဝါတွေထဲမှ ခွေးရဲ့ပုံစံကိုရွေးပြီးတော့ စက်ရုပ်ခွေးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ကိုမပို့မီ အချိန်မှာ A.X.L က ဓာတ်ခွဲခန်းထဲကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်စီးကျွမ်ကျင်သူ ဟေးလ်နဲ့ ကွင်းပြင်ထဲမှာဆုံမိပါတော့တယ်။ ကြမ်းတမ်းသန်မာတဲ့စက်ရုပ်ခွေးဖြစ်သူ A.X.L နဲ့ လူသားဖြစ်သူ ဟေးလ်တစ်ယောက် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ? ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ? စတဲ့မေးခွန်းတွေ အကြင်နာတရားနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကို ဒွန်တွဲဖော်ပြတင်ဆက်ထားတဲ့ကားကောင်းလေးပါ။ Spoilerပါမှာစိုးလို့ အနည်းငယ်သာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Credit Review Zawgyi အဆိုေတာ္ေခ်ာေခ်ာေလး Becky G ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ႔ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးတစ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းေလးနာမည္က A.X.L (2018) ပါ။ Science fiction/action ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးေတြသေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္တဲ႔ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ေတာ႔ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္မွာပါပဲ။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကိုလဲ တင္ဆက္ေပးပါဦးမယ္။ A.X.Lဆိုတာက စစ္တပ္သံုးဖို႔ အထူးတီထြင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ ေခြးစက္ရုပ္ပါ။ A.X.L ဆိုတဲ့နာမည္ေလးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုေၿပာၿပရရင္ A ...
Truth or Dare (2018) သူငယ္ခ်င္းတစ္အုပ္ လူငယ္ေတြပီပီ spring break ျဖစ္တာနဲ႔ Mexico ကိုသြားလည္ၿပီး လႊတ္ေသာင္းက်န္းၿပီး ေပ်ာ္ပါးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားေက်ာင္းပ်က္ႀကီးတစ္ခုကို ေရာက္ၿပီး truth or dare ကစားနည္းကို ကစားမိတဲ့အခါမွာေတာ့ မေကာင္းဆိုးဝါးပါ ဝင္ေႏွာင့္တဲ့အတြက္ သူငယ္ခ်င္းေတြၾကား ေသတဲ့သူေသ၊ ျပႆနာေတြတက္နဲ႔ တိုင္ပတ္ကုန္ၾကပါေတာ့တယ္။ Review Credit - Datshin
IMDB: 5.1/10 29,884 votes